मिलान मा सप्ताहन्त - उडान प्रस्ताव प्लस तीन होटेल रातहरू | यात्रा समाचार
मिलान मा सप्ताहन्त प्रस्ताव, उडान प्लस होटल
सुसाना Godoy | | बोलपत्र
हामी यो प्रेम गर्दछौं जब हामी ती उडान र होटल समावेशी डिलहरू पाउँछौं। किनभने कुनै श doubt्का बिना, जब हामी खाताहरू गर्छौं, हामी बुझ्छौं कि यो झन् धेरै नाफा भएको छ। ठिकै छ जुन हामीले तपाईंको लागि फेला पारेका छौं। A मिलानमा सप्ताहन्तको प्रस्ताव, ताकि तपाईं एक उत्तम रोमान्टिक पलायनको लाभ लिन सक्नुहुनेछ।
कहिलेकाँही हामीसँग समय हुन्छ तर हामी सोच्छौं कि यात्रा वास्तवमै भन्दा बढी महँगो हुनेछ। तसर्थ, मिलन मा सप्ताहन्तको प्रस्ताव संग, तपाईं राम्रो संभव तरिका मा फेब्रुअरी महिना शुरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग अझै सोच्ने समय छ, तर धेरै छैन किनकि यो प्रस्ताव को प्रकार, तिनीहरू उडान गर्छन् र कहिल्यै राम्रो भनेका छैनन्।
1 उडान + होटल मिलानमा एक सप्ताहन्तको लागि
2 हाम्रो आगमनको दिनमा मिलानमा के हेर्ने
3 मिलान मा पहिलो दिन
4 मिलान मा दोस्रो दिन
उडान + होटल मिलानमा एक सप्ताहन्तको लागि
मिलान मा सप्ताहन्त धेरै विशेष छ। किनभने हामी ती मध्ये एउटा प्रस्तावलाई पार गर्दै आएका छौं जुन पास गर्न यत्ति सजिलो छैन। कुलमा, तीन रातहरू सबैभन्दा प्रभावशाली स्थानहरू मध्ये एकमा रमाइलो गर्न। यस प्रस्तावमा, दुबै उडान र बसाई समावेश छन्। छनौट गरिएको स्थान हो होटल निवास Zumbini, जसमा टेलिभिजन र नि: शुल्क Wi-Fi जडानको साथ कुल rooms० कोठा छ। थप रूपमा, तपाईसंग साझा भान्साकोठा छ यदि तपाईं रेस्टुरेन्टहरूमा खाना बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने। हो, बाथरूम निजी हो।
यो होटल केन्द्रबाट 3,4..5 किलोमिटर पर अवस्थित छ। के सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि यसको स्थान उत्तम बनाउँछ। केवल kilometers किलोमिटर टाढा तपाईंसँग मिलान क्याथेड्रल र the राष्ट्रिय संग्रहालय हुनेछ। तसर्थ, यसको दुबै नजिक र सरलता, यो हामीलाई आराम गर्नको लागि राम्रो ठाउँ बनाउनको लागि संभव बनाउँनुहोस्। दिन देखि हामी सामान्य रूपमा एक बाट अर्को साइडमा हुनेछौं। त्यसो भए दुबै उडान र यस स्थानमा तीन रातमा हाम्रो १ 172२ यूरो लाग्नेछ, व्यक्ति। यदि विचारले तपाईंलाई विश्वस्त बनाउँछ भने, तपाईं यहाँ रिजर्भेसन गर्न सक्नुहुन्छ अन्तिम समय.
हाम्रो आगमनको दिनमा मिलानमा के हेर्ने
जब हामी दिउँसो हाम्रो गन्तव्यमा पुग्छौं, हामी अझै पनि होटेलमा जानु पर्छ र अन्तमा, समय उड्दछ। तसर्थ, हामी के गर्न सक्दछौं सबैभन्दा धेरै प्रतीकात्मक सडकहरू वा वर्गहरूको पहुँच गर्नुहोस् र यसलाई आरामको साथ लिनुहोस्, रमाइलो साँझको आनन्द लिनुहोस्। को डुओमो स्क्वायर यो मिलन मा हाम्रो सप्ताहन्तको लागि एक राम्रो सुरूवात बिन्दु हो।
त्यहाँ तपाईं भेट्नु हुनेछ मिलान क्याथेड्रल। सबै भन्दा धेरै प्रतीकात्मक भवनहरू। १ 157 मिटर भन्दा बढीमा यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्याथेड्रलहरू मध्ये एक हो। यसको निर्माण १ 1386 मा शुरू भयो तर five शताब्दी भन्दा बढी समयसम्म चले। यस कारणका लागि, यसमा धेरै शैलीहरू फ्यूज गरिएका छन्। त्यसोभए, हामी ठाउँ र वरपरका सडकहरूको मज्जा लिन सक्छौं। दुबै 'Via Dante' र 'प्लाजा डेला स्काला' पनि मौलिक छन्।
मिलान मा पहिलो दिन
बिहान हामी नजिक जान सक्दछौं 'पियाजा मर्कन्ती'। यो एक रमणीय छ जुन हामीले आनन्द लिन सक्छौं। यहाँ हामी खोजी गर्नेछौं 'पलाज्जो डेला रागियोन'। एउटा भवन जुन हामी यसको रातो ईंटको धन्यवादमा भिन्नता राख्न लाग्दछौं र यसको उद्घाटन १२1233 मा भयो। मूर्तिहरू र हतियारहरूको लहराले हामीलाई 'लोगगिया डिग्ली ओस्ली' प्रस्तुत गर्दछ, जहाँबाट विभिन्न सार्वजनिक घटनाहरूको घोषणा गरिएको छ।
एउटा जुन सबैभन्दा प्रतिष्ठित स्कूल थियो यो अहिले पनि यस बिन्दुमा छ 'कासा देई पानिगारोला' र 'पलाज्जो डे ज्युरेकनसुल्टी'। दान्ते मार्फत हामी असंख्य क्याफे र रेस्टुरेन्टहरू पुग्नेछौं तर केहि अगाडि हामी 'सोफर्जेस्को कैसल' देख्छौं। अर्को रत्न भेट्न। निश्चित रूपमा यस सेक्सन पछि, दिउँसोको लागि, हामी सबैभन्दा प्रतीकात्मक पसलहरूमा जान्छौं वा क्याफेहरूमा रोक्नको लागि आराम गर्न र तिनीहरूको सबै सुविधाहरूको आनन्द लिने छौं।
मिलान मा दोस्रो दिन
तपाईं कल गर्न सक्नुहुन्छ 'स्मारक कब्रिस्तान'। धेरैका लागि यो उनीहरूको दिमागमा पहिलो स्टप होइन, तर विशाल बहुमतका लागि यो एक प्रकारको संग्रहालय हो तर खुला हावामा। त्यहाँबाट हामी असंख्य इटालियन मूर्तिहरू साथै ग्रीक मन्दिरहरू देख्नेछौं। प्रवेशद्वारमा हामी पहिले नै यस स्थानका केही प्रख्यात नामहरूको चिहानहरू बुझ्न सक्छौं। यसको सानो संस्करण पनि छ 'ट्राजनको स्तम्भ'। सान्ता मारिया डेले ग्राजीको चर्च पनि ठूलो चासोको विषय हो किनभने यसमा लियोनार्डो दा भिन्सीले दिएको 'द लास्ट सपर' समावेश गर्दछ। सब भन्दा प्रसिद्ध चित्रहरु मध्ये एक, तर हो, यसलाई हेर्नको लागि तपाईले अग्रिम बुकिंग गर्नुपर्नेछ।
यदि तपाईं नजिकको क्षेत्र को लागी जारी राख्न चाहानुहुन्छ भने हामी भेट्नेछौं सेन्ट एम्ब्रोजको बेसिलिका। यो ११ औं शताब्दीमा रोमनस्किक शैलीमा पुन: निर्माण गरियो। योसँग विभिन्न उचाइमा ईंट टावरहरू छन्, तर यसले धेरै ध्यान आकर्षित गर्दछ। तपाईं यसलाई बिहान र दिउँसो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले हतार नगर्नुहोस्। यसको पछि, तपाईं पुरातात्विक संग्रहालय वा सान मौरिजियोको चर्चमा जान सक्नुहुन्छ। यद्यपि हामी बिर्सन सक्दैनौं सैन लोरेन्जो म्यागिजोरको चर्चकिनकि यो मिलानमा सब भन्दा पुरानो हो। 'पिनाकोटेका एम्ब्रोसियाना' मा तपाईंले २ 24 कोठा पाउनुहुनेछ जुन अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरू सहित लियोनार्डो दा भिन्सी वा काराभागीओले अन्यमा उल्लेख गर्दछन्। यदि हामीसँग अझै केहि समय बाँकी छ भने, हामी सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण सडकहरूमा हिंड्नेछौं, किनकि तिनीहरूले कहिलेकाँही अन्तहीन रहस्यहरू भेट्टाउने छन् जस्तै नाभिली छिमेकीहरू, यसको नहरहरूसहित। मिलान मा एक पूरा सप्ताहन्त!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » बोलपत्र » मिलान मा सप्ताहन्त प्रस्ताव, उडान प्लस होटल
इस्माइल काजारास भन्यो
राम्रो लाग्दछ तपाईंले विशेष कोशिस गर्नु पर्दछ धन्यवाद।
इस्माइल काजारालाई जवाफ दिनुहोस्
सुसाना Godoy भन्यो
सुसाना Godoy लाई जवाफ दिनुहोस्
सुन्दर गिली टापु
एम्स्टर्डम रेड लाइट जिल्ला